चकलेटको लागि पानी जस्तै: लौरा एस्क्विभलको बेस्टसेलर | वर्तमान साहित्य
चकलेट को लागी पानी यो मेक्सिकन लेखक लौरा एस्क्विवेलको सबैभन्दा मान्यता प्राप्त काम हो। १ 1989 2001 in मा प्रकाशित भएपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यहरूमा क्लासिक भयो। यो जादुई यथार्थवादको उल्लेखनीय overtones संग एक गुलाब उपन्यास हो। २००१ मा, अखबार संसार "बीसौं शताब्दीको स्पेनीसका १०० सर्वश्रेष्ठ उपन्यासहरूको सूचीमा" कथा समावेश गरिएको छ।
कथानक टिटाको जीवनमा आधारित छ, एक महिला जो एक असम्भव प्रेम र कुकिंगको बीचमा बस्दछन्, र जो एक पारिवारिक परम्पराको पालना गर्न धेरै कठिनाइहरूको बीचबाट जान्छ। यस इतिहासलाई धन्यबाद, एस्क्विवेल पहिलो विदेशी लेखक थिए प्रख्यात एबीबीवाई पुरस्कार जित्नुहोस्, १ 19947in मा हालसालै आफ्नो रिलीज भएदेखि यस कार्यले million० लाख भन्दा धेरै प्रतिहरू बिक्रि गरेको छ र 30० भन्दा बढी भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ।
1 चकलेटका लागि पानी जस्तो सारांश (१ 1989 XNUMX))
2 चकलेटका लागि पानी जस्तै विश्लेषण (१ 1989 Like Like)
2.2.1 टीटा (जोसेफाइट)
2.2.2 मामा एलेना (मारिया एलेना डी ला गर्जा)
2.2.3 पेद्रो मुजक्विज
2.2.6 अन्य पात्रहरू
3 लेखक लौरा एस्क्विभलको केहि जीवनी डेटा
3.1 क्यारियर पथ
3.3 साहित्यिक दौड
3.4 लौरा एस्क्विभल द्वारा पुस्तकहरु
सारांश चकलेट को लागी पानी (1989)
जोसेफाइट R वा अर्का टीटालाई सबैले चिनेझैं उनी तीन बहिनीहरूमध्ये कान्छी थिइन्। उनी मारिया एलेना र जुआन डे ला गर्जाबीचको संघको उत्पादन हो। जब उनी आफ्नी आमा - मामा एलेनाको गर्भमा थिए, उनी परिवारको खेतको भान्छामा अकालमै जन्मेको दिनमा पनि, रुँदै सुनेका थिए। केवल दुई दिन पुरानो संग, टिटा बुबाको टुहुरा हो र घरको कुक, नाचाको छेउमा हुर्केकी छे.
धेरै युवा देखि, वातावरण जुन यो बढ्छ तपाइँ पाक कला प्रेम गर्दछ, जुन उनी नाचको शिक्षा अन्तर्गत सिद्ध थिए। उनको किशोरावस्थामा, टीता एक उत्सवको लागि आमन्त्रित गरिएको छ; त्यहाँ पेद्रोलाई भेट्नुहोस्, दुवै जना तिनीहरू मायामा फसे पहिलो नजारमा। चाँडै पछि - आफ्नो गहिरो भावनाबाट प्रेरित - यस जवान मानिस डे ला गरजा परिवार खेतमा जान्छ, आफ्नो प्रियको हातको लागि मामे एलेनालाई सोध्ने संकल्प।
पत्रुसको अनुरोध अस्वीकृत छ, जस्तो, समयको चलन अनुसार टीटा कान्छी छोरी हुनको लागि - उनी बुढेसकालमा आफ्नी आमाको हेरचाह गर्न एक्लै रहनु पर्छ। समकक्षमा, मामे एलेनाले उनलाई उनको जेठो छोरा रोसौरासँग विवाह गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। अप्रत्याशित रूपमा, युवाले आफ्नो जीवनको प्रेमको नजीकको इरादाका साथ प्रतिबद्धता स्वीकार गर्दछ।
विवाह हुनुभन्दा एक दिन अघि नाचाको मृत्यु भयो। नियमित मा, टिटा नयाँ कुक हुनुपर्दछ। विवाह हुन्छ र टीटा गहिरो दु: खमा डुब्छन्, त्यसैले हरेक प्लेटमा उनी प्रसारण गर्दछे तिम्रो अधिक टाढा भावनाहरु.
त्यहाँबाट घटनाहरूको श्रृ series्खलाहरू हुन्छन् जुन धेरैको आशा गरिएको भए पनि, घुमाउरो र मोड हुन्छ जुन एक भन्दा बढी उत्सुक पाठकलाई चकित तुल्याउँछ। जोश, पीडा, पागलपन र इन्ग्रेन गरिएको भन्सारहरू समय को, तिनीहरू हुन् केहि सामग्रीहरू जुन यस कथालाई जीवनमा ल्याउँदछ "निषेधित" प्रेममा आधारित।
विश्लेषण चकलेट को लागी पानी (1989)
चकलेट को लागी पानी यो एक छ चिह्नित जादुई यथार्थवादको साथ गुलाबी उपन्यास। छ १००० पृष्ठहरू र मा विभाजित छ Cha अध्यायहरू। यो मेक्सिकन क्षेत्र मा सेट गरिएको छ, विशेष गरी Piedras Negras de Coahuila शहर मा। कथा १ 1893 XNUMX। मा सुरू हुन्छ र years१ बर्ष कभर गर्दछ; त्यो अवधिमा मेक्सिकन क्रान्ति (१ 1910 १०-१-1917१XNUMX) स्थिति जुन प्लाटमा प्रतिबिम्बित हुन्छ।
कामको विशिष्टताहरू मध्ये, लेखकले वर्षको महिनाको साथ अध्यायहरू प्रतिनिधित्व गर्थे र प्रत्येक सँगसँगै मेक्सिकन डिशको नाम पनि राख्थे। प्रत्येक सेक्सनको सुरूमा, सामग्रीहरू खुलासा हुन्छन्, र कथा कथित छँदा, नुस्खा विवरणमा वर्णन गरिएको छ। उपन्यास तेस्रो व्यक्ति कथावाचक द्वारा सम्बन्धित छ, जसको नाम यसको अन्तमा प्रकट हुनेछ।
उनी उपन्यासको मुख्य पात्र र मुख्य अक्ष हुन्, डे ला गर्जा परिवारको कान्छी छोरी र एक असाधारण कुक। उनीसँग एउटै घरमा बस्दा पनि, उनको जीवनको प्रेमसँग नहुनुको दुखद भाग्य उनीमा छ। उनकी आमाले दमन गर्नुपर्दा, उनी पकाउने अन्य शौकमा शरण लिन्छिन्। एक जादुई तरिकामा, उसले आफ्नो भावनाहरु आफ्नो अति उत्तम व्यंजनहरु मार्फत पुर्‍याउनेछ।
मामा एलेना (मारिया एलेना डी ला गर्जा)
यो हो रोसौरा, गर्टरुडिस र टीटाकी आमा। यो बारेमा छ कडा चरित्र, अधिनायकवादी र कडा महिला। विधवा भए पछि उनी परिवारको शिर हुनुपर्दछ र खेतीवाल र उनका सबै छोरीहरूको देखभाल गर्नुपर्नेछ।
उहाँ उपन्यासका सह-कलाकार हुनुहुन्छ; निराश भएर पनि टिटाको प्रेममा, आफ्नो प्रेमको नजिक रहनको लागि उनले रोजौरासँग विवाह गर्ने निर्णय गरे। समय र परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि, टिटाप्रतिको उनको भावना अटल रहनेछ।
उनी डे ला गरजा परिवारको रचोको कुक हुन्, र कसले यस बाहेक, नायकको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
उनी दे ला गर्जा दम्पतीको पहिलो छोरी हुन्सिद्धान्त र चलनहरूको एक युवती, जो उनले आफ्नो आमाको आदेशबाट पेद्रोसँग विवाह गर्नुपर्नेछ.
कथा भरि अन्य पात्रहरू अन्तर्क्रिया गर्दछन् जो प्लट को लागी एक विशेष स्पर्श दिनुहुन्छ। ती मध्ये हामी हाइलाइट गर्न सक्छौं: गेरट्रुड (टीटाकी बहिनी), चेन्चा (टीटाकी दासी र साथी) र Jhon (परिवार डाक्टर)।
लेखकको निर्देशक अल्फोन्सो अराउसँग १ director 1975 देखि १ 1995 XNUMX from सम्म विवाह भएको थियो, यो थियो प्रबन्धक प्रदर्शन उपन्यास को फिल्म अनुकूलन। लरा आफैंको श्रीमानको सहयोगमा फिल्मको स्क्रिप्ट लेख्ने काममा थिए। १ 1992 in २ मा १००% मेक्सिकन उत्पादनको साथ १० एरियल पुरस्कार र with० भन्दा बढी अनुवादका साथ सम्मानित यस फिल्मको प्रिमियर पछि अत्यन्तै सफलता प्राप्त भएको थियो।
दशकौंसम्म चलचित्र सर्वाधिक कमाई गर्ने मेक्सिकन सिनेमामा रह्यो। उनलाई महत्वपूर्ण पुरस्कारका लागि मनोनयन गरिएको थियो, जस्तै: १ 1993 1995 in मा गोया र गोल्डेन ग्लोब पुरस्कार। तर, सबै कुरा राम्ररी थिएन: १ XNUMX XNUMX in मा लेखकले उनको पूर्व पतिलाई तलाक कागजातमा (अंग्रेजीमा) हस्ताक्षर बनाएकोमा मुद्दा हालेका थिए। उनले उपन्यासको अधिकार छोडिदिए। अन्तमा, मेक्सिकन लेखक परीक्षण जित्यो।
लेखक लौरा एस्क्विभलको केहि जीवनी डेटा
लेखक लौरा बिटिएराज एस्क्विभेल वाल्ड्सको जन्म शनिबार सेप्टेम्बर ,०, १ 30 on० मा कुआउतमोक (मेक्सिको) मा भएको थियो। जोसेफा वाल्डेस र टेलिग्राफर जूलियो एस्क्विवेलको बिहेमा उहाँ तेस्रो छोरी हुनुहुन्छ। १ 1968 XNUMX मा, उनले प्रारम्भिक बचपन शिक्षा स्नातकको रूपमा स्नातक गरेपनि थिएटर र नाटकीय निर्माणको अध्ययन गर्नुभयो CADAC (मेक्सिको सिटी) मा बच्चाहरूको वर्गमा।
सन् १ 1977। Since देखि उनी विभिन्न कार्यशालामा शिक्षिका थिइन् थिएटर, लिपि परामर्श र लेखन प्रयोगशाला, विभिन्न मेक्सिकन र स्पेनिश शहरहरूमा। १० बर्षसम्म (१ 10 -1970०-१1980०) उनले बच्चाहरूको लागि मेक्सिकन टेलिभिजन कार्यक्रमहरूका लागि विभिन्न लिपिहरू लेखे। १ 1985 XNUMX मा, उनले फिल्मको लागि स्क्रिप्टको निर्माणको साथ सिनेमेटोग्राफिक क्षेत्रमा डेब्यू गरे। Chido Guán, El Tacos De Oro।
२०० 2007 देखि उनी राजनीतिमा लागे; एक बर्ष पछि उनी २०११ सम्म कोयोआकनको संस्कृतिको सामान्य निर्देशक थिइनन्। उनी मोरेना पार्टी (राष्ट्रिय उत्थान आन्दोलन) का हिस्सा हुन्, जुन २०१ 2015 मा मेक्सिकोमा संघको क federal्ग्रेसको संघीय नायबका रूपमा निर्वाचित भयो.
१ 1989। In मा, उनले आफ्नो पहिलो उपन्यास प्रस्तुत गरे, शीर्षक चकलेट को लागी पानी. यस पुस्तकको सफलता अनुसरण गर्दै, १ 1995 2017 to देखि २०१ from सम्म लेखकले नौ थप आख्यानहरू उत्पादन गरे, जहाँ निम्नलिखित बाहिर खडा: इच्छा जति छिटो (2001), मालिन्चे (2005), Tita डायरी (2016) y मेरो कालो भूत (२०१ 2017); यी अन्तिम दुई त्रिकोण पूरा चकलेट को लागी पानी।
लौरा एस्क्विभल द्वारा पुस्तकहरु
चकलेट को लागी पानी (1989)
Tita डायरी (2016)
मेरो कालो भूत (2017)
प्रेमको व्यवस्था (1995)
घनिष्ठ रसीला (कथाहरू) (१ 1998 XNUMX))
समुद्री तारा (1999)
भावनाहरु को पुस्तक (2000)
इच्छा जति छिटो (2001)
लुपिताले इस्त्री मनपराउँथि (2014)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » रोमान्स उपन्यास » चकलेट को लागी पानी